Wadooyinka muhiimka ah ee Muqdisho oo maanta xiran. – SBC
Wadooyinka muhiimka ah ee Muqdisho oo maanta xiran.
Posted by SBC Editor on May 12, 2015 Comments
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa xiran wadooyinka muhiimka ah ee Magaalada Muqdisho, iyadoo bulshada saaka ay yihiin kuwa lugeynaya.
Qaar Kamid Ah Wadooyinka xiran ayaa waxaa ka mid ah wadada maka Al-Mukarama oo ilaa shaqaalaha ka xiran, wadada sodonka loo yaqaan iyo wadada wadnaha oo dhamaantood waxaa jooga ciidamada Booliiska iyo Nabad Suggida.
Wararka ayaa sheegaya in sababta wadooyinka loo xiray ay tahay in Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kormeer ku tagayo xarumo ay ka mid tahay Wasaarada Gaashaandhiga iyo goobo kale oo isbitaalo ah sida wararka aan ku helnay.
Booqashada Madaxweynaha uu xarumahaasi ku tagayo awgeed ayaa loo caqabadeeyay kumanaan dad ah oo shaqo tag ah, kuwaasi oo raaci jiray gaadiidka dadweynaha. Qaar ka mid ah Bulshada ayaa kuu sheegaysa inay ku dhib qabaan Safarada Madaxda dalka iyo booqashooyinka xarumaha qaar ee Muqdisho, maadaama wadooyinka loo xiraayo.
Dowladda Soomaaliya oo ammaanka guud ee Muqdisho gacanta ku haysa, ayaanan hadana kalsooni ku qabin amniga, caasimada oo waxa ay ka baqayaan weerarada qorsheysan ee Shabaabka geystaan.
Ma’ahan markii ugu horeysay oo wadooyinka Muqdisho qaar loo xiro Xasan Sheekh Maxamuud, xilli madaxda ay dareemayaan caqabada bulshada uga imaanaysa xirnaanshaha wadooyinka, balse aysan dhag jalaq u siinin.